Ọ bụ ihe ezi uche dị na ịmepụta otu ibe weebụ ecommerce maka ndị ahịa Amazon?
Ọtụtụ ndị ahịa n'ahịa, karịsịa ndị na-agba obere azụmahịa, na-eji usoro ịzụ ahịa Amazon bụrụ nanị otu ahịa ahịa. Ịkwụsị ahịa na Amazon adịghị achọ oge na ego idogo. Ihe niile ị chọrọ bụ ịchọta ngwaahịa ịchọrọ ịzụ ahịa, depụta ya maka ire ere, zipu ya na Amazon, ma ha na-eme ihe niile maka gị. Ọzọkwa, Amazon bụ otu n'ime usoro ntanetị kachasị mma na weebụ ebe ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-amalite ma kwụsị ọrụ ịzụ ahịa ha. Ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ka ị dọta ndị ọrụ site na ọchụchọ na azụmahịa gị. Ha ga - achọta ọrụ gị na ndabara n'ihi na ha na - ele Amazon anya dị ka ebe nrụọrụ weebụ a ma ama nke nwere ike inye ha nkwa. Ọ bụ ya mere ndị ahịa na-ere n'ịntanetị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ụlọ ahịa isii na asaa na-ahụ maka azụmahịa na Amazon.
Otú ọ dị, dabere na ihe mgbaru ọsọ gị, Amazon nwere ike imeju mkpa gị ma ọ bụ gbochie usoro nke nkwado gị. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe ezi uche dị na ya iji tụlee atụmatụ azụmahịa gị na Amazon.
Ka anyị gbanwee na nchịkọta dị ugbu a. Dị ka ọnụ ọgụgụ nke afọ na-adịbeghị anya na-egosi, ọnụahịa niile nke B2C ecommerce ahịa bụ $ 393 ijeri. 55% nke ego dum mere site na ụlọ ahịa echekwara, na ihe na-erughị 45% nke uru zuru oke site na ahịa. Nbibi nke 45% na ahịa na-egosi na pasent 36 nke ego ahụ dị na Amazon, 8% na eBay na naanị 1% na nhazi ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi na ị kwadoro ịkwado ngwaahịa gị na Amazon. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịbụ ezi echiche ịga na Amazon na eBay. Otú ọ dị, ọ ka bụ ohere kachasị mma iji mụbaa ika gị na weebụ..Otú ọ dị, ịmepụta ụlọ ahịa weebụ nwere ike inyere gị aka ịmalite ịmalite ịmara na weebụ ma bulie ahịa ọ bụghị naanị na Amazon.
Ka anyị tụlee otú otu ụlọ ahịa weebụ nwere ike isi meziwanye ọnụọgụ Amazon gị na uru ndị ị ga-enweta na ya.
Uru nke ịkwalite ụlọ ahịa na-ere akwụkwọ
Gbasaa karịa Amazon maka nkwado akara
Cheedị otu ọnọdụ gị onye ahịa nwere ike ile ngwaahịa gị na Amazon. Ọ na-achọta ihu ahịa ngwaahịa gị ma chọrọ ịnweta ozi gbasara gị na ihe ndị ọzọ ị na-ere ahịa. Ma eleghị anya, ebe mbụ ọ ga-ele anya bụ ụlọ ahịa weebụ gị. N'okwu a, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-abụrụ nzi ngwa ngwa. Ọ ga-egosi gị aha ọma na azụmahịa nkwado. Ma ọ dịkarịa ala ụlọ ahịa weebụ gị abụghị ọrụ zuru ezu nke ireahịa ecommerce; ọ bụ isi iyi nke akara gị. Ọ na - eje ozi dịka ebe ị na - ekekọrịta akụkọ gị, gbasaa na njirimara ngwaahịa ma nye ozi kọntaktị dị mkpa. Ụlọ ahịa weebụ a ma ama bụ MUST ọ bụrụ na ị na-ere ahịa dị oké ọnụ ahịa ma dị oké ọnụ ahịa dịka ọla, ngwá electronic, wdg.
Gbasaa karịa Amazon maka Amazon Ndenye aha
iji mepụta ụlọ ahịa weebụ gị akara aka bụ ike itinye akara gị na Amazon Brand Registry. Ọ bụrụ na e debere ika gị na ndekọ ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ohere iji jikwaa ọnụọgụ ngwaahịa. Ọ pụtara na ahịa ndị ọzọ apụghị ịgbanwe ndepụta gị n'ihi na ị bụ otu isi iyi nke eziokwu nke ngwaahịa gị.
Dịka onye na-emepụta emepụta nwere ike ịmeghe onwe gị gaa ndị ahịa ndị ọzọ na-ere n'Ịntanet site n'ịkekọrịta foto ha, na-emelite ule gị ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe nkọwa gị Source .